နေပြည်တော်တွင် အလုပ်သင်ရှေ့နေကို ခင်ပွန်းဟောင်းက နေ့ခင်းကြောင်တောင် လည်လှီးသတ် - Yangon Media Group
နေပြည်တော်တွင် အလုပ်သင်ရှေ့နေကို ခင်ပွန်းဟောင်းက နေ့ခင်းကြောင်တောင် လည်လှီးသတ်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၇-အလုပ်သင် ဆင်းနေသည့် ရှေ့နေအမျိုးသမီး ကို ခင်ပွန်းဟောင်းက နေ့ခင်းကြောင် တောင် ဓားဖြင့်လည်လှီးသတ်မှု နေ ပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၂၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီက တပ်ကုန်းမြို့ နယ် ၀က်စုကျေးရွာနေ ဦးအောင် မင်း (၆၃) နှစ်သည် သမီးဖြစ်သူ မဆုရည်ဖြိုး (၂၈) နှစ်နှင့်အတူ ၎င်းင်းပိုင့် သညိန အမျိုးအစား အနက် ရောင်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မဆုရည်ဖြိုး က မောင်းနှင်ပြီး တပ်ကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးသို့သွား ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့သွားရောက်နေစဉ် နံ နက် ၈ နာရီခွဲခန့်တွင် နေပြည် တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ် နွယ်ရစ် ကျေးရွာအလွန် နွယ်ရစ်ဆီဆိုင် အနီး ရန်ကုန်-မန်္တလေးကားလမ်း ဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၇၁/ ၁) အရောက် အေးရှားဝေါတိုး ဂိတ်ဘက်မှ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေ အထားဖြင့် ခဲရောင်ဆိုင်ကယ်စီး နင်းလာသည့် မဆုရည်ဖြိုး၏ ခင် ပွန်းဟောင်း မောင်စိုး (ခ) အောင် စိုး (၄၅) နှစ်အား ရုတ်တရက်တွေ့ ရှိသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး လမ်းဘေး ၌ရှောင်တိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တိမ်းရှောင်နေစဉ် မောင်စိုး (ခ) အောင်စိုးက ၎င်းင်း တို့အနားသို့ရောက်လာကာ လွယ် အိတ်ထဲမှ ဓားမြှောင်ဆွဲထုတ်ခဲ့ ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဓားကိုဆွဲထုတ် နေစဉ် မဆုရည်ဖြိုး၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်မင်းက ““ဟေ့ကောင် မင်းဘာလုပ်တာလဲ””ဟု မေးစဉ် မောင်စိုး (ခ) အောင်စိုးက ““ခင်ဗျား အနားမကပ်နဲ့၊ ခင်ဗျားနဲ့မဆိုင် ဘူး””ဟု အော်ဟစ်ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ဆိုင်ကယ်ပေါ် ခွထိုင်နေသည့် မဆုရည်ဖြိုး၏ ပခုံးကိုဆွဲဖက်လှဲချကာ ဓားဖြင့် လည် ပင်းကိုလှီးလိုက်သဖြင့် ကားလမ်း ဘေး မြက်ခင်းပေါ်သို့ လဲကျသွား ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ထပ်မံပြီး ဓားဖြင့် လည်ပင်းကိုဆက်လှီးခဲ့ ကြောင်း၊ ဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်မင်း ကလည်း မောင်စိုး (ခ) အောင်စိုး ကို ခြေထောက်ဖြင့်ပြေးကန်စဉ် သွေးစွန်းနေသည့်ဓားကို အောင်စိုး က ပြန်သိမ်းကာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း တပ်ကုန်း မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရ သည်။
မဆုရည်ဖြိုးမှာ လည်ပင်းတွင် ခြောက်လက်မခန့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာ ၌ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း တပ်ကုန်းမြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
သေဆုံးသူနှင့် ကျူးလွန်သူ မောင်စိုး (ခ) အောင်စိုးသည် လွန်ခဲ့ သည့်တစ်နှစ်က အတူပေါင်းသင်း နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်တစ် လခန့်က ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်တရား ရုံးတွင် ကွာရှင်းထားကြောင်း တပ် ကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးကပြောသည်။
““ကွာရှင်းတာကို မကျေနပ်လို့ ဒီနေ့မှ နောက်ကနေ လိုက်နှောင့် ယှက်တဲ့အနေအထားပဲ။ သတ်ဖို့ အထိ ကြံရွယ်ရင်လည်းရွယ်ထားမှာ ပေါ့””ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ၎င်းင်း က ဆက်လက်ပြောသည်။
ကျူးလွန်သူမှာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေကြောင်းသိရသည်။
သေဆုံးသူသည် အလုပ်သင် ရှေ့နေဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ် ခန့်မှစ၍ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တရား ရုံး၌ ချိန်ပါဆင်းနေကြောင်း ၎င်းင်း ကပြောသည်။
ယင်းအသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ် သက်ပြီး နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့ မရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၁၈/ ၂၀၁၈၊ ရာဇ သတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၀၂ (လူသတ်မှု)ဖြင့် ကျူးလွန်သူ မောင်စိုး (ခ)အောင်စိုးကို အမှုဖွင့်ထားသည်။
တရားသူကြီး နေမကောင်းဟုဆိုကာ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးအမှု အမိန့်ချမည့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း၊ အ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၏ နီပေါခရီးစဉ်တွင် အိန္ဒိယသို့ ပဲတင်ပို့ရေး နီပေါနှင့် ကုန်သွယ
ခန္တီးနှင့် ဟုမ္မလင်း ချင်းတွင်းမြစ်ကူး တံတားနှစ်စင်း တည်ဆောက်မှု ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီး၊ ဧြ?
အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေမှ ငွေကျပ်သန်း ၆ဝဝဝ ကျော် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု အပေါ် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်
ကောလင်းတွင် လူတစ်ဦး ရေတွင်းထဲပြုတ်ကျသေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးအတွက် အမှတ် (၁) နယ်ခြားစောင့် ကွပ်ကွဲမှုအဖွဲ့ရုံး၏ ကွပ်ကဲမှုအေ
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဆေးဝါး အရောင်းဆိုင် လေးဆိုင်ကို FDA က ရှောင်တခင်စစ်ဆေးရာ မှတ်ပုံတင်မ??
“နိုင်ငံကြီးသား” ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွင် ပထမဆုံးပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အောန်ဆိုင်း အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ . . .
ကျောက်ဆည်မြို့ ညောင်ရွှေကျေးရွာတွင် စွမ်းဇာတ်သဘင်အဖွဲ့ ရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် ပွဲပျက်
ဒေ့လက်ဒပ်ဗ်လက်ခံပါက ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံရှစ် (WLC-4) တွင် တူးတူးနှင့်တွဲဆိုင်းစီစဉ်မည်၊ အနိုင